Madaafiic Lagu Garaacay Xerada Xalane Ee Muqdisho. – Calamada.com
Madaafiic Lagu Garaacay Xerada Xalane Ee Muqdisho.
calamada May 3, 2016 1 min read
Saqdii dhexe ee xalay ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey tiro madaafiic ah ku garaaceen xerada Xalane oo ah saldhiga ugu weyne ee ciidamada Kufaarta Afrikaanta ay ka sameysteen gudaha magaalada Muqdisho.
Dhawaaqa madaafiicda waxaa si aad ah looga maqlayay qeybo badan oo ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho iyo duleedka magaalada’iyadoona warar dheeraad ah ay kasoo baxayaan duqeynta.
Warar hoose ayaa sheegaya in shan madfac ay gudaha u galeen xarunta Xalane’waxeyna wararka intaasi ku darayaan iney jiraan khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed oo taliska Kufaarta AMISOM kasoo gaartay duqeyntaasi.
Madaafiicdan ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin habeenkii xalay ku garaaceen xerada Xalane ayaa kusoo aadeysa in maalintii shalay magaalada Muqdisho ay kasoo dageen saraakiil iyo askar ka socota dowlada Nasaarada Ingiriiska kuwaasi oo xiligii duqeynta ku sugnaay gudaha xerada Xalane.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 26-07-1437 Hijri.
Next: Bam Lagu Tuuray Fariisinka Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka.